5 Calaamadood Oo Lagu Ogaado Khiyaanada Guurka – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA 5 Calaamadood Oo Lagu Ogaado Khiyaanada Guurka
5 Calaamadood Oo Lagu Ogaado Khiyaanada Guurka
Rag iyo dumar badan ayaa ku nool nolol aan wanaagsaneyn shaki ay ka qabaan lamaanahooda nolosha darteed, shakigu caadi ahaan waxa uu ka bilowdaa marka mid ka mid ah lamaanaha uu dhaqankiisu uu isbedelo. Haddaba, waxaa jira calaamado kuu caddeynaya khiyaanada, waa sida uu qoray website-ka Instyle.
Calaamadaha khiyaanada Guurka lagu ogaado
1- Taleefoonka gacanta iyo laptop-ka
Inta badan qofka khaa’inka ah aad ayuu ugu dedaalaa in aan la baadhin waxyaabaha u gaarka ah sida; taleefoonkiisa gacanta iyo computerkiisa laptop-ka u gaarka ah, ducomentyadiisa qaar waxa uu ku xidhnayaa password si aan loo ogaan waxa guddaha ku jira.
Gaadhiga fiiro gaar ah u yeelo
Waxyaabaha ugu muhiimsan gaadhiga ayaa ka mid ah, si ula kac ah ama aan ula kac ahayn ayaa wax loogaga tagaa, kursiga oo sare looqaado ama hoos loo dhigo waxyaabaha dareenka leh ayay ka mid tahay.
Isbedel Lama Filaan ah
Isbedelkaasi waxa uu noqon karaa dhinacyo badan, sida; miisaanka oo hoos u dhaca, si lama filaan ah oo sports-ka u jeclaado, habka uu tinta u shallaysanayo/feedhanaayo oo isbedesha, hadalkiisa oo isbedela, arrimaah oo dhani waa calaamado kuu shidaya laambad casaan ah in khiyaano ay jirto.
Dookhyo aadan hore ugu aqoon oo uu la soo baxayo sida; heeso aanu hore u dhageysan jirin oo uu dhagaysanayo, …
Xidhiidhkiinna oo Isbedela
Liiska waxyaabaha noloshiisa/nolosheeda hortabinta u leh ayaa ka baxaysaa, sida; shaqada, ehelka iyo saaxiibbada, haddii aad iska weydo liiska hore oo ra’yigaaga aan la qaadaneyn, go’aannada nolosha ugu muhiimsan oo aadan ka qeybqaadaneyn, arrimahaasi waxay caddeyn u yihiin in khiyaano ay jirto iyo cid booska kaala baxday.
Previous articleKooxda Macaawisleeyda oo weerar culus ku qaaday Al-shabaab
Next articleWararkii ugu Dambeeyay Xiisad Dagaal oo ka Taagan Gobolka Sanaag